China gburugburu ebe obibi enyi na-adigide achara n'èzí ụlọ nrụpụta na ụlọ ọrụ | Achara ọlaedo
A na-eji eriri bamboo emere ngwaahịa REBO, site na 2700 tọn na-agbanye ọkụ na usoro carbonized, nke na-eme ka bọọdụ ahụ dịgide, na-esi ike, ma sie ike. Achara achara na-aghọwanye ewu ewu na ahịa mba ụwa. Elu bụ obere profaịlụ na-efegharị efegharị na azụ ya ma ọ bụ azụ azụ ya.
Achara n'èzí bụ achara achara. Akụrụngwa maka ime ala achara dị n'èzí bụ sọsọ moso achara, nke na-adị mma na gburugburu ebe obibi. A na-ejikarị ụlọ achara dị n'èzí na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị elu na nrụgide dị elu. Ya mere, njupụta nke ime ụlọ achara dị n'èzí dị elu karịa nke ụlọ ala achara na nke osisi.
Ndabere bụ otu ebumnuche nke REBO, na-eme ka REBO Bamboo decking bụrụ eziokwu.
Enwere ọtụtụ ihe na ọtụtụ mmadụ na - ahọrọ ụdị akwa achara maka ụlọ na ịchọ mma. Akụkụ ndị bụ isi nke osisi achara dị n'èzí dị n'okpuru:
1) Ọ dịghị warping, ọ dịghị cracking, ileghara eguzogide.
2) Mmiri na-eguzogide ọgwụ, a na-anwale bọọdụ osisi bamboo REBO na ọnọdụ mmiri ma rụọ klas 4, nke kwesịrị ekwesị maka mpụga, na ịkpọtụrụ ala na mmiri dị mma.
3) Ọ dịghị ebu, enweghị ahụhụ.
4) Na-eguzogide oke ihu igwe na ihu igwe dị iche iche
5) Enyi na gburugburu ebe obibi, chekwaa oke ohia.
A na-eji eriri bamboo emere ngwaahịa REBO, site na 2700 tọn na-agbanye ọkụ na usoro carbonized, nke na-eme ka bọọdụ ahụ dịte aka, sie ike, ma sie ike. Achara achara na-aghọwanye ewu ewu na ahịa mba ụwa. Elu bụ obere profaịlụ na-efegharị efegharị nke nwere azụ ma ọ bụ azụ azụ. Ọkọlọtọ ogologo bụ 1860mm, ọkọlọtọ obosara bụ140mm, ọkpụrụkpụ bụ18mm. N'ezie, ọkpụrụkpụ ahụ nwere ike ịbụ 20mm na ndị ọzọ. Ọ dabere na arịrịọ ndị ahịa.
Nke gara aga: E1 Eurpean ọkọlọtọ eco-friendly achara flooring n'èzí
Osote: Weather eguzogide ọgwụ E1 ọkọlọtọ achara decking mbadamba